Waxa lagu arko Picos de Europa: Layaabyada dabiiciga ah iyo tuulooyinka quruxda badan | Wararka Safarka
Luis Martinez | 10/09/2021 11:00 | Ekotourism, Espana
Ka hadal waxa lagu arko Picos de Europa waa in lagu sameeyo muuqaalka dabiiciga ah ee cajiibka ah, tuulooyinka ay ka buuxaan soo jiidashada iyo waddooyinka buuraha ee quruxda badan. Waxaas oo dhami aad bay ugu badan yihiin buurahaas buuraha leh way nagu adag tahay inaan kuu soo saarno.
Lahaanshaha Buuraha Cantabrian, Picos de Europa waa qaab dhismeedka dhagaxa weyn oo ku fidsan gobollada León, Cantabria iyo Asturias. Sidoo kale, inta badan meelihiisu waxay ku dhex jiraan Beerta Qaranka Picos de Europa, oo ah tii labaad ee ugu booqashada badnaa Spain kadib Teide, oo ku taal jasiiradda Tenerife (halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan baarkinkan Canarian).
1 Waxa lagu soo booqdo Picos de Europa: Laga soo bilaabo dooxooyin cajiib ah ilaa tuulooyin dhaqameed
1.1 Covadonga iyo harooyinka
1.2 Poncebos iyo Garganta del Cares, yaab kale
1.3 Bulnes iyo Urriellu
1.4 Dooxada Hermida
1.5 Monastery of Santo Toribio de Liébana
1.6 Potes, yaab kale oo lagu arko Picos de Europa
Waxa lagu soo booqdo Picos de Europa: Laga soo bilaabo dooxooyin cajiib ah ilaa tuulooyin dhaqameed
Picos de Europa wuxuu ka kooban yahay saddex cufan: kan bari ama Andara, dhexe ama Baaqyada iyo reer galbeedka ama Cornion. Ma kuu sheegi karno midka ugu qurux badan, laakiin waxaan kuu sheegi karnaa booqashooyinka lagama maarmaanka ah ee ay tahay inaad ku sameyso dhammaantood. Aan aragno.
Covadonga iyo harooyinka
Goobta Boqortooyada ee Covadonga
Haddii aad gasho Picos de Europa by Cangas de Onís, caasimada Boqortooyada Asturias ilaa sanadka 774, waxaad gaari doontaa buurta Covadonga, goob cibaado oo loogu talagalay rumaystayaasha iyo booqasho aan laga maarmi karin oo loogu talagalay kuwa aan sabab u ahayn sooyaalkeeda quraafaad iyo taariikheed.
Duulaan weyn, waxaad ka heli doontaa Basilica ee Santa María la Real de Covadonga, dhisme neo-medieval laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad oo beddelay kaniisaddii hore ee alwaaxda ahayd. Sidoo kale isaga Kaniisadda San Pedro, oo ah taallo Taariikhi-Farshaxan ah oo weli ilaalinaysa walxaha Roomaanka. Dhankeeda, Kaniisada Royal Collegiate ee San Fernando Waxaa laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad oo dhan waxaa dhammaystiray taallada naxaasta ah ee Pelayo, obelisk leh Cruz de la Victoria, astaanta Asturias, iyo waxa loogu yeero "Campanona", oo dhererkeedu yahay saddex mitir iyo 4000 kiilo oo miisaan ah.
Laakiin, gaar ahaan rumaystayaasha, booqashada Godka quduuska ah, meesha shaxanka ee Virgin ee Covadonga iyo qabriga loo malaynayo Pelayo laftiisa. Ku sii socoshada dhaqanka, waxaa la sheegay in meeshan Goth uu magan geliyay ciidamadiisii ​​intii lagu jiray Dagaalkii Covadonga.
Ka dib markaad booqato aaggan cajiibka ah, waxaad aadi kartaa harooyinka, oo u jira laba iyo toban kiilomitir oo keliya. Gaar ahaan, waxaa jira laba, Ercina iyo Enol waxayna ku sugan yihiin deegaan dabiici ah oo cajiib ah oo buuro iyo aagag cagaaran ah. Waxaad ugu tegi kartaa iyaga baabuur (oo leh xaddidnaan) ama maraya wadiiqooyin aad u fiican.
Poncebos iyo Garganta del Cares, yaab kale
Poncebos waa magaalo yar oo buuro leh oo ka tirsan golaha Cabrales oo aad ku gaari doontid muuqaallo cajiib ah. Waxaa ka buuxa soo jiidasho, laakiin tayadeeda ugu weyni waxay tahay inay ku taal hal daraf Wadada Daryeelka.
Safarkan ayaa kugu mideeya Qaabiil, oo horeba ugu jiray gobolka León, oo leh dherer qiyaas ahaan ah 22 kiiloomitir. Sidoo kale loo yaqaan Cunaha Rabbaaniga ah maxaa yeelay wuxuu dhex maraa derbiyada dhagaxa weyn ee waaweyn, wuxuu leeyahay qaybo uu abuuray gacanta aadanaha.
Ka faa'iidaysiga nabaadguurka uu soo saaray webiga Cares, bilowgii qarnigii XNUMXaad qaybo ka mid ah dhagaxii ayaa la qoday si looga faa'iidaysto hantida korontada ee warshadda Camarmeña. Natiijadu waxay ahayd raad -raac aad u cajiib ah oo ka mid noqotay kuwa ugu quruxda badan adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaad maanka ku haysaa inay tahay waddo toosan, ee aysan ahayn mid wareegsan. Taas macnaheedu waa, haddii aad ku bilowdo Poncebos oo aad aragto adigoo daalan, waxaad yeelan doontaa laba ikhtiyaar oo kaliya: ku noqo magaaladan ama sii wad Caín. Sikastaba, safarku waa cajiib.
Meelaha aad ku arki karto haddii aad samayso, waxaan tusaale ahaan u xusi doonnaa Murallón de Amuesa ama Collar dabin. Laakiin, hal kilomitir u jirta Poncebos, waxaad ka heli doontaa Bulnes funicular, kaas oo na geeya meel kale si aan ugu aragno Picos de Europa.
Bulnes iyo Urriellu
Tareenka rack -ka ama funicular -ka ayaa ku geeya magaalada quruxda badan ee Baalash, inkasta oo aad sidoo kale ku tagi karto waddo lugaynaysa Texu Channel. Si kastaba ha ahaatee, marka aad timaado tuuladan cajiibka ah, waxaa hortaada ka furmi doona muraayad dabiici ah oo aan caadi ahayn.
Waxaad arki doontaa adigoo ku hareeraysan meelaha ugu sarreeya oo u muuqda inay kugu soo dhaweynayaan jawi mudnaan leh oo casriyeyntii aad mooddo inaysan soo gaarin. Laakiin waxaad sidoo kale arki doontaa guryo dhagax ah oo lagu diyaariyey luuqyo dhagaxa leh. Haddii, marka lagu daro, aad kor ugu kacdo Uptown, aragtida ayaa xitaa noqon doonta mid cajiib ah.
Sida haddii waxaas oo dhami aysan ku filnayn, Bulnes waa mid ka mid ah meelaha laga soo galo Qiimaha ugu sarreeya ee Urriellu, oo caan ku ah Naranjo de Bulnes waayo milicsiga cajiibka ah ee qorraxdu ka samayso buurtan. Waxaad samayn kartaa waddo socod oo aad ku tagto gabbaadka iyo, markaad halkaas tagto, haddii aad jeceshahay fuulitaanka, fuulo xagga sare, maadaama ay leedahay dhowr waddo oo sidaas lagu sameeyo.
Laakiin dariiqyada kale ee lugaynta ayaa iyaguna ka bilaabma Bulnes. Waxaa ka mid ah, kuwa ku geeya Pandébano Col, a Sotres ama Xigasho. Dhanka dambe, gadaal baan ka hadli doonnaa.
Desfiladero de la Hermida Ilaa hadda, waxaan kuu sheegnay meelo cajiib ah oo ku yaal qaybta Asturian ee Picos de Europa. Laakiin Cantabrian -ka kama foga xagga bay'ada dabiiciga ah iyo meelaha ay ka buuxaan soo jiidashada dhaqanka.
Caddaynta wanaagsan ee tan ayaa ah dooxada Hermida, oo soconaysa 21 kiiloomitir inta u dhaxaysa darbiyada dhagaxa weyn iyo banka wabiga deva. Dhab ahaantii, waa tan ugu dheer Spain oo dhan. Waxay ku fadhidaa dhul ka badan lix kun oo hektar oo loo kala saaray Aagga Gaarka ah ee Shimbiraha.
Laakiin godka weyn ee Hermida ayaa sidoo kale muhiim u ah sabab kale. Waa waddada kaliya ee laga soo galo xeebta ilaa quruxda badan Gobolka Liébana, kaas oo aad ka heli doonto waxyaabo kale oo badan si aad ugu aragto Picos de Europa. Waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah.
Waxay ku taal degmada Lebaniego de Chameleno, kaniisaddan soo rogaya waa meel xajka, sida xaalka Santiago de Compostela (halkan waxaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan waxa lagu arko magaaladan). Sida kaniisadda Galician, waxay leedahay a Albaabka Cafiska waana taallo qaran laga soo bilaabo 1953kii.
Haddii aan fiiro gaar ah u yeelanno dhaqanka, waxaa la aasaasay qarnigii XNUMXaad Toribio, ka dibna hoggaamiyaha kiniisadda Astorga. Laakiin waxaa aad muhiim ugu ah rumaystayaasha inay tahay guriga Lignum Crucis, gabal iskutallaabta ah oo lagu qodbay Ciise Masiix. Qaar ka mid ah shaqooyinka caanka ah Beatus ee Liebana.
Dhinaca kale, keniisadku waa dhismaha ugu weyn ee gole dhammaystiray Godka barakaysan, oo ah qaabkii Roomaankii hore; hermitages of San Juan de la Casería iyo San Miguel, laga soo bilaabo qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad siday u kala horreeyaan, iyo burburkii Sanctuary of Santa Catalina.
Potes, yaab kale oo lagu arko Picos de Europa
Aad ugu dhow keniisadda Santo Toribio de Liébana waa magaalada Potes, oo ah magaalo aad u qurux badan oo ku faanto qaybta dhisme taariikheed waana caasimadda gobolka Liébana.
Mid ka mid ah meelaha soo jiidashada ugu weyn leh ayaa ah waddooyinkeeda cidhiidhiga ah oo cidhifsan. Dhammaantood, waxaad ku arki doontaa guryo caan ah oo lagu yaqaan aagga, gaar ahaan aagga Xaafada Solana. Buundooyinka sida San Cayetano iyo La Cárcel ayaa sidoo kale soo jiidan doona dareenkaaga.
Laakiin astaanta weyn ee Potes waa Taallada Infantado, oo dhismihiisu soo bilaabmay qarnigii XNUMX -aad, inkasta oo sawirka uu maanta na siinayo ay sabab u tahay dib -u -habayntii qarnigii XNUMX -aad oo siisay xubno Talyaani ah. Sida xiisaha leh, waxaan kuu sheegi doonnaa inay ahayd gurigii manor ee Marquis ee Santillana, abwaan caan ah oo reer Spain dhexe ah.
Waa inaad sidoo kale ku booqataa Potes the kaniisadda San Vicente, oo dhismihiisu dhacay intii u dhaxaysay qarniyadii afar iyo tobnaad iyo siddeed iyo tobnaad, oo, haddaba, isku daraya walxaha Gothic, Renaissance iyo Baroque.
Fuente Dé baabuurka fiilada
Waxaan ku soo gabagabeynay socdaalkii Picos de Europa annagoo kaaga sheekeyneyna magaaladan yar ee ku taal degmada Camaleño. Waxay ku taallaa ku dhawaad ​​siddeed boqol oo mitir oo joogga ah, si aad u gaarto, waxaad isticmaali kartaa muuqaal cajiib ah Cableway si dhib yar ayay ku qaadataa saddex daqiiqo in lagu safro.
Fuente Dé waxaad ku leedahay cajiib aragtida kaas oo ku siinaya aragtiyo cajiib ah buuraha iyo dooxooyinka kuu dhow. Laakiin sidoo kale waxaad ku tagi kartaa magaalada adoo raacaya waddooyinka oo sidoo kale leh muuqaal qurux badan. Iyaga dhexdooda, waxaan ku xusi doonnaa kor u kaca Alto de la Triguera, wareegga ku wareegsan Peña Remonta ama waxa loogu yeero waddooyinka Áliva iyo dekedaha Pembes.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah yaababkii ee Picos de Europa. Si kastaba ha noqotee, sidaan kuu sheegnay, waxaa jira kuwo kale oo badan oo ay tahay inaan ka tagno dhuumaha. Waxaa ka mid ah, magaalada Arenas de Cabrales, Asturias, oo leh dhismeheeda quruxda badan ee caanka ah iyo daaraheeda waaweyn sida Mestas iyo Cossío; qaali ah godka Beyos, taas oo calaamad u ah waddada webiga Sella oo kala soocaysa massif -ka galbeed inta kale ee buurta Cantabrian, ama Tusmada ugu hooseysa ee Torrecerredo, kan ugu sarreeya Picos de Europa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Maxaa lagu arkaa Picos de Europa
Sida loo labisto Dubai